Ma u Baahan Tahay Inaad Hubiso DNS Goob Ahaan Adoo Isticmaalaya Martida OSX? | Martech Zone
Ma u Baahan Tahay Inaad Hubiso DNS Goob Ahaan Adoo Isticmaalaya Martida OSX?
Khamiista, Febraayo 21, 2019 Jimco, Febraayo 22, 2019 Douglas Karr
Mid ka mid ah macaamiishayda ayaa u raray degelladooda koontada martigelinta badan. Waxay cusbooneysiiyeen dejimaha DNS ee cinwaanadooda A iyo CNAME laakiin waqti adag ayey ku jireen go'aaminta in goobta lagu xalliyey koontada martigelinta cusub iyo (Cinwaanka cusub ee IP).
Waxaa jira waxyaabo yar oo ay tahay in maskaxda lagu hayo marka cilad-bixinta DNS. Fahamka sida DNS u shaqeeyo, fahamka sida Diiwaanhayahaaga Domain u shaqeeyo, ka dibna fahamka sida martidaadu u maamuleyso gelitaankooda domain.
Sidee DNS u shaqeeyaa
Markaad ku qorto cinwaan biraawsar:
Cinwaanka waxaa laga eegay internetka server name si loo helo meesha codsiga loo dirayo.
Marka laga hadlayo codsiga websaydhka (http), server server ayaa magacaabi doona ku soo celiyaa cinwaanka IP-ga kombiyuutarkaaga.
Kombiyuutarkaagu wuxuu markaa kaydiyaa tan gudaha, oo loo yaqaan 'your' Kaydka DNS.
Codsiga waxaa loo diraa martigeliyaha, kaas oo marin u ah codsiga gudaha wuxuuna soo bandhigayaa bartaada.
Sidee Diiwaanhayahaaga Domain u shaqeeyaa
Xusuusin ku saabsan tan… maahan diiwaan-haye kasta inuu run ahaantii maareeyo DNS-kaaga. Waxaan haystaa hal macmiil, tusaale ahaan, oo diiwaangeliya degmooyinkooda iyadoo loo marayo Yahoo! Yahoo! runti ma maamusho domainka inkasta oo ay uga muuqato maamulkooda. Kaliya waa iibiyayaal Tucows. Natiijo ahaan, markaad isbeddel ku sameyso goobahaaga DNS ee Yahoo!, Waxay qaadan kartaa saacado ka hor inta aan isbeddelladaas dhab ahaan lagu cusbooneysiinin dhabta ah diiwaan-hayaha domain.
Marka goobahaaga DNS la cusbooneysiiyo, ka dib ayaa lagu soo bandhigayaa dhowr server oo internetka ah. Inta badan, tani macno ahaan waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi inay dhacdo. Tani waa hal sabab oo dadku u bixin doonaan maareeyay DNS. Shirkadaha DNS ee la maareeyay waxay caadi ahaan leeyihiin shaqo ka fariisasho oo si dhakhso leh ayey u dhaqso badan yihiin… badanaa ka dheereeya diiwaan-hayahaaga.
Marka server-yada internetka la cusbooneysiiyo, waqtiga xiga ee nidaamkaagu sameeyo codsiga DNS, cinwaanka IP-ga ee bartaada martigelinta ayaa la soo celiyaa. FIIRO GAAR AH: Maskaxda ku hay in aan idhi marka xigta ee nidaamkaagu codsado. Haddii aad horey u codsatay bartaas, Internetku wuu cusbooneysiin karaa laakiin nidaamka deegaankaaga ayaa laga yaabaa inuu xalliyo cinwaan IP hore ah oo ku saleysan DNS Cache-kaaga.
Sida ay Ushaqeyso DNS Host-kaaga
Cinwaanka IP-ga ee soo noqnoqday oo keydiyay nidaamka deegaankaagu caadi ahaan kuma gaar aha hal degel. Marti-geliyuhu wuxuu yeelan karaa daraasiin ama xitaa boqolaal degello lagu martigaliyay hal Cinwaan IP ah (sida caadiga ah server ama server dalwad leh) Marka, markii boggaaga laga codsado Cinwaanka IP-ka, martidaada ayaa u sii gudbineysa codsigaaga cinwaanka galka gaarka ah ee ku dhex jira server-ka waxayna soo bandhigaysaa boggaaga.
Sida loo xaliyo dhibaatada DNS
Sababtoo ah waxaa halkan ka jira seddex nidaam, sidoo kale waxaa jira seddex nidaam oo lagu xaliyo dhibaatada! Marka hore, waxaad ubaahantahay inaad iska hubiso nidaamka deegaankaaga si aad u aragto halka Cinwaanka IP-ga uu ku tilmaamayo nidaamkaaga:
Tan waxaa si fudud loogu sameeyaa iyadoo la furo daaqad Terminal ah oo teeb gareeya:
Ama waxaad dhab ahaantii sameyn kartaa raadinta magaca magaca gaarka ah:
Haddii aad cusbooneysiisay goobaha DNS ee diiwaankaaga domain, markaa waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in keydkaaga DNS la nadiifiyey waxaadna u baahan doontaa inaad mar labaad codsato. Si aad u nadiifiso keydkaaga DNS ee OSX:
Waxaad isku dayi kartaa ping or nslookup si loo arko haddii cinwaanka uu xalliyo cinwaan cusub oo IP ah xilligan.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in la arko haddii Internets DNS server la cusbooneysiiyay. Hayso Waxyaabaha DNS ku habboon tan, waxaad ka heli kartaa warbixin buuxda oo DNS ah iyada oo loo marayo barnaamijkooda run ahaantii wanaagsan. Flywheel wuxuu leeyahay Checker weyn oo DNS ah oo ku yaal meeshuu ku yaal halkaas oo ay weydiin doonaan Google, OpenDNS, Fortalnet, iyo Shabakadaha Baaritaanka si loo arko haddii goobahaaga ay si habboon ugu faafiyeen shabakadda.
Haddii aad aragto cinwaanka IP-ga oo si sax ah loogu soo bandhigay webka oo shabakadiina aysan wali soo muuqan, sidoo kale waad dhaafi kartaa boggaga internetka waxaadna u sheegi kartaa nidaamkaaga kaliya inaad codsi toos ah ugu dirto Cinwaanka IP-ga. Waad ku guuleysan kartaa tan adoo cusbooneysiinaya feylashaada martida ah oo aad ku shubeyso DNS-kaaga. Si tan loo sameeyo, fur Terminal oo ku qor:
sudo nano / iwm
Gali lambarkaaga sirta ah oo riix gala. Taasi waxay si toos ah ugu keeni doontaa feyl-ka Terminal-ka si loo saxo. Dhaqdhaqaaqa tilmaamahaaga adoo adeegsanaya fallaarahaaga oo ku dar sadar cusub cinwaanka IP-ga oo uu ku xigo magaca domainka.
Si aad u kaydiso faylka, riix xakamaynta-o kumbuyuutarkaaga ka dibna ku noqo si aad u aqbasho magaca faylka. Ka bax tifaftiraha adigoo riixaya xakamaynta-x, kaas oo kugu celin doona khadka taliska. Ha iloobin inaad maydhato keydkaaga. Haddii degelku uusan soo bixin okay, waxay dhibaato ku noqon kartaa deegaankaaga oo waa inaad la xiriirtaa oo aad u sheegtaa.
Xusuustii ugu dambeysay… ha ilaawin inaad ku soo celiso feylashaada martida loo yahay qaabkeedii hore. Uma baahnid inaad ka tagtid meel laga soo galo halkaas oo aad rabto inaad si otomaatig ah u cusbooneysiiso!
Anoo raacaya talaabooyinkan, waxaan awooday inaan xaqiijiyo in diiwaankeyga DNS-ka ah ee diiwaan hayaha ay cusbooneysiiyeen, diiwaanada DNS-ka ee internetka ku jira ay cusbooneysiiyeen, Mac-keyga DNS-ga ee Mac-na uu cusbooneysiiyey, iyo DNS martigeliyaha websaydhka oo dhammaaday ilaa maanta… wanaagsan in la tago!
Moosend: Suuqgeynta & Iskuduwaha emaylka